HIV पोजेटिभ आमाछोरीको संसार रुहाउने काहानी ,सानो छाप्रोमा यस्तो अवस्थामा भेटिए (भिडियो सहित) – Ap Nepal
November 26, 2021 216
यो सानो टिनले बेरेको छाप्रोमा दुई आमाछोरी एलिसा कोइराला र सञ्चिता बस्छन् । तर दुबै जनामा HIV पोजेटिभ छ । अहिले काखमा यी सानी नानी । आर्थिक अवस्था पनि दहनिय।
मात्र १३ महिनाकी यी सानी नानीलाई के थाहा आफुलाई जन्मजात HIV पोजेटिभ छ भनेर । त्यसैले आफ्नी आमाको काखमा उनी रमाइ रहेकी छन्। यी सानी नानीको नाम सञ्चिता तर जन्मदै HIV पोजेटिभ छन् । उनकी आमालाई पनि पोजेटिभ छ बेलाबेला आफुलाई निकै गाह्रो हुन्छ त्यसैले उनी भन्छीन् म अब धेरै बाँच्दिन होला।
सञ्चिताको आमाले पहिलो श्रीमान बितेपछी दोस्रो बिहे गरेकी हुन दोस्रो बिहे गरे पछी एउटी छोरीको जन्म हुन्छ तर बिडम्बना दोस्रो श्रीमानले पनि छोरी जन्मेको ३ महिनामै छोडेर हिडे। छोरी जन्मेको १ महिनामा नै छोरीलाई ज्वरो आउने जाति नहुने भएकोले सञ्चितालाई अस्पतालमा HIV पोजिटिभ रहेको मेडिकल रिपोर्टमा देखाउछ। त्यसपछी आमालाई पनि पोजेटिभ नै देखाउछ सञ्चिताको आमाले तलको भिडियोमा बताएकी छन् ।
आर्थिक अबश्था निकै कम्जोर श्रीमानले पनि छोडेर गए पछी बिहान बेलुकाको छाक टार्न नजिकको बङ्गुर फाममा काम गर्छीन्।
बिहान बेलुका छाक टार्नलाई भनेर यो परीवारले निकै संघर्ष गरिरहेको छ भने कहाँबाट उपचार खर्चको व्यवस्था गर्ने ? कृपया यसै बिषयमा अरुन पोष्ट टीभीका पत्रकार प्रकाश लिङ्गदेनले तयार पारिएको अन्तरवार्ता तल प्रश्तुत गरिएको छ,हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला।
बाँकी तलको भिडियो हेर्नुहोस्।
Prev३५ वर्षका यी युवाको शरिर भरी के पलायो यस्तो ,? शरीभरी लुर्का लिएर हिड्नुको पि:डा (भिडियो हेर्नुहोस्)
Nextआज बढ्यो सुनको मुल्य , तोलामा कति बढ्यो त ?